1 Samueri 7:1-17
7 Naizvozvo varume vokuKiriyati-jearimu+ vakasvika, vakakwira neareka yaJehovha, vakaipinza muimba yaAbhinadhabhi+ yaiva pachikomo, uye vakatsaura mwanakomana wake Eriyezari kuti arinde areka yaJehovha. 2 Kubvira pazuva rokugara kweAreka muKiriyati-jearimu mazuva akaramba achiva mazhinji, zvokuti akasvika makore makumi maviri, imba yose yaIsraeri ikachemera Jehovha.+ 3 Samueri akati kuimba yose yaIsraeri: “Kana muchidzoka kuna Jehovha nemwoyo yenyu yose,+ bvisai vanamwari vokune dzimwe nyika pakati penyu+ uyewo mifananidzo yaAshtoreti,+ muise mwoyo yenyu kuna Jehovha musingatsauki, mushumire iye oga,+ uye achakununurai paruoko rwevaFiristiya.”+ 4 Vanakomana vaIsraeri vakabva vabvisa vanaBhaari+ nemifananidzo yaAshtoreti,+ vakatanga kushumira Jehovha oga. 5 Samueri akabva ati: “Unganidzai vaIsraeri+ vose kuMizpa,+ kuti ndikunyengetererei+ kuna Jehovha.” 6 Naizvozvo vakaungana kuMizpa, vakachera mvura vachiidururira pamberi paJehovha, vakatsanya pazuva iroro.+ Vakatanga kuti ipapo: “Takatadzira Jehovha.”+ Samueri akatonga+ vanakomana vaIsraeri kuMizpa. 7 Zvino vaFiristiya vakanzwa kuti vanakomana vaIsraeri vakanga vaungana kuMizpa, madzishe akabatana+ evaFiristiya akauya kuzorwisa vaIsraeri. Vanakomana vaIsraeri pavakazvinzwa, vakatanga kutya vaFiristiya.+ 8 Naizvozvo vanakomana vaIsraeri vakati kuna Samueri: “Musaramba makanyarara musingashevedzeri kuna Jehovha Mwari wedu nokuda kwedu kuti tibatsirwe,+ kuti atiponese paruoko rwevaFiristiya.” 9 Samueri akabva atora gwayana raiyamwa, akaripa Jehovha kuti rive chinopiwa chinopiswa, chinopiwa chakakwana;+ Samueri akashevedzera kuna Jehovha kuti vaIsraeri vabatsirwe,+ Jehovha akamupindura.+ 10 Samueri paaipa chinopiwa chinopiswa, vaFiristiya vakaswedera pedyo kuti varwise vaIsraeri. Jehovha akaita kuti kutinhire noruzha rukuru+ zuva iroro achirwisa vaFiristiya, kuti avavhiringidze;+ uye vakakundwa nevaIsraeri.+ 11 Varume vaIsraeri vakabva vabuda muMizpa vachimhanya, vakatevera vaFiristiya, vakaramba vachivauraya kusvikira kumaodzanyemba kweBheti-kari. 12 Samueri akabva atora dombo,+ akariisa pakati peMizpa neJeshana, akaritumidza kuti Ebhenezeri. Naizvozvo akati: “Jehovha atibatsira kusvikira zvino.”+ 13 Nokudaro vaFiristiya vakakundwa, havana kuzouyazve munharaunda yevaIsraeri;+ uye ruoko rwaJehovha rwakaramba ruchirwa nevaFiristiya mazuva ose aSamueri.+ 14 Maguta akanga atorerwa vaIsraeri nevaFiristiya akaramba achidzoka kuvaIsraeri kubvira kuEkroni kusvikira kuGati, vaIsraeri vakanunura nharaunda yavo paruoko rwevaFiristiya. Pakava norugare pakati pevaIsraeri nevaAmori.+ 15 Samueri akaramba achitonga vaIsraeri mazuva ose oupenyu hwake.+ 16 Gore negore aifamba uye aitenderera Bheteri+ neGirigari+ neMizpa+ uye aitonga vaIsraeri+ panzvimbo dzose idzi. 17 Asi aidzokera kuRama,+ nokuti ndiko kwaiva neimba yake, uye aitonga vaIsraeri ikoko. Iye akavakira Jehovha atari ikoko.+